Hot – H2H
သင့်ရဲ့လက်သန်းပုံစံက ဖော်ပြနေသော သင့်အကြောင်းများ
လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖဝါးက သူ့ဘဝ အကြောင်းတွေနဲ့များစွာပတ်သက်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း လက္ခဏာ ပညာရပ်က ထင်ရှားတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်လက်က ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးရင် အဖြေတွေကို တစ်ပုံချင်းစီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ မြိုသိပ်လွန်းသူ (A) ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို...
သင့်ဘ၀အတွက် ချစ်သူအဖြစ် ရေရှည်လက်မတွဲသင့်တဲ့ လူ (၆)မျိုး ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူဘ၀ရရှိဖို့အတွက် အရာများစွာထဲက သစ္စာရှိမှုဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သဘောတူကြပေမယ့်တစ်ချို့လူတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို မလိမ်ညာပဲနဲ့ အသက်မရှင်နိုင်ကြပါဘူး။ သူတို့တွေကိုတော့ ဘယ်လောက်ပဲလိမ်ညာပါစေ အချိန်ကသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နုပျိုတဲ့အချိန်တွေ မကုန်ဆုံးဖို့အတွက် ကွဲပြားတဲ့လူတွေထဲက...
ဖုန်းအတုအစစ် ခွဲခြားရန်အတွက် အလွယ်ကူဆုံးသော အချက် (၆) ချက်
တချို့ချို့သော နာမည်ကြီးတံဆိပ်များမှာ အတုအပ တွေအရမ်းများပါတယ်။ တစ်ချို့အတုတွေဆို အစစ်နဲ့ပင် အလွန်စင်တူအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကျုပ်တို့တွေအနေဖြင့် ခွဲခြားဖို့ အတော်ပင်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်(H2H)ကနေပြီးတော့ ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမတွေအတွက် အတုနဲ့အစစ် ခွဲရန်အထင်ရှားဆုံးသော အချက်တစ်ချို့ကို ရွေးချယ်ပြောပြသွားမှာပါ။ တစ်ချို့သော အတုအပတွေမှာကျတော့ ထုတ်ပိုးမှုပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ ပါကင်ဘူးမှာက အစကွာခြားသွားပါတယ်။ တစ်ကယ့် အစစ်တွေမှာကျတော့...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်သင့်ကို ချစ်သေးလားမချစ်တော့ဘူးလားဆိုတာသိစေနိုင်တဲ့ အချက်(၈)ချက်
ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယော်ကိုယ့်ကို မချစ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြလာပါလ်ိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်မှာ မိမိခံနိုင်ေ၇ရှိနေမှဖြစ်မှာ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံတွေပြောင်းလဲတတ်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)မိမိပြောတဲ့စကားကို မျက်ကွယ်တွေပြုလာမယ် (၂)မိမိအပေါ်မှာသူ သ၀န်တိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး (၃) မိမိသူ့ကို ပို့တဲ့ Message တွေကို သူဂရုမစိုက်တော့ဘူး (၄) အရင်လို ခရီးတွေတူတူမသွားချင်းတော့တာမျိုး (၅) မိမိနဲ့အတူ အချိန်တွေမဖြုန်းချင်တော့ဘူး (၆)...
သင့်ကိုချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက် (၁၀) ချက် အမျိုးသမီးတွေဟာ အများအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးသကဲ့သို့ သူတို့ခံစားချက်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတလေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို အပြင်မထုတ်ပဲ ရင်ထဲမှာပဲသိမ်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ ခံစားချက်ကို သိရှိနိုင်ဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ချစ်မိသောအခါ ချစ်သူအပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေက သိသိသာသာကို ခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင်ထိ...
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ…
ညဉ့်နက်တဲ့အထိ မအိပ်ဘဲနေခြင်း လေ့လာချက်တွေအရ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ ညဘက်တွေဆို ညဉ့်နက်မှ အိပ်ယာဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျိမ်ပြောတတ်ခြင်း။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မှန်ကန်ကြောင်း ကျိမ်ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို နှစ်သက်ခြင်း ဥာဏ်ရည် ထက်မြတ်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ယောက်တည်း အချိန်ဖြုံးရတာကို ပိုမိုနှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အစား ဝါးစားနေတဲ့အသံတွေကို စိတ်ဆိုးခြင်း ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေဟာ...
သင်အိပ်တဲ့အခါ အိပ်ရာပေါ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဘာ့ကြောင့် မထားသင့်တာလဲ?
လူတိုင်းက အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်တွေအတွက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူတို့မိုဘိုင်းဖုန်းကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဒီကိရိယာရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို စဉ်းစားမိဘူးလား? သင်ဒီအကြောင်းကို မစဉ်းစားမိဘူးဆိုရင် အောက်ပါအချက်အလက်များက သင့်ကိုတုန်လှုပ်စေပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိပ်နေသူနားမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး တည်ရှိခြင်းက အမြဲတမ်း အိပ်မပျော်မှုတွေအတွက် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အိမ်မက်ဆိုးတွေ...
သင်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးကို ရုပ်ပုံတွေကဆင့်ပြောပြတာဟာ နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ပုံတွေဟာ လူမှုစိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်တာကြောင့် သင်တို့စုံတွဲနဲ့ ဆင်တူတဲ့ရုပ်ပုံကိုလက်နဲ့ထိပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးအခြေအနေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ #1 သင်တို့စုံတွဲလိုပါပဲ၊ အမျိုးသမီးလေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီးတော့ အဲဒီ့အကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပြောပြချင်နေပါတယ်။ သူမကအရမ်းကိုလွတ်လပ်ပျော်ရွင်နေပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပဲထင်ထင် သူမကဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမရွေးချယ်ထားတဲ့ချစ်သူက သူမအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေပြီးတော့...
သင့်ကို မချမ်းသာစေတဲ့ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်များ
စာရေးဆရာ Thomas C. Corley ဟာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ငါးနှစ်တာမျှ လေ့လာမှုတွေပြုခဲ့ပါတယ်။ poverty habit တွေဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အလေ့အကျင့်တွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ၁။ လောင်းကစားလုပ်ခြင်း Corney က ပြောပါတယ်။ ချမ်းသာဖို့ အတိုနည်းလမ်းဆိုတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ မြန်မြန်ချမ်းသာနည်းဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။...
ကမ္ဘာ့ နာမည်အကြီးဆုံး သရဲအရုပ် (၅) ရုပ်
အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ Annabelle ရုပ်ရှင်ဟာလည်း ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် သရဲ့အရုပ်တွေထဲမှာ တစ်ရုပ်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Annabelle အပါအဝင် သူ့လိုပဲ ကြမ်းပေ့ ရမ်းပေ့ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး သရဲအရုပ် (၅) ရုပ်အကြောင်းကိုဘာသာပြန် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (1) Annabelle Annabelle အရုပ်ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ သူနာပြုကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Donna ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို...